अाजको खेल: ब्राजिल बलियो कि कोष्टारिका कडा? – Himalaya TV
Home » खेलकुद » अाजको खेल: ब्राजिल बलियो कि कोष्टारिका कडा?
अाजको खेल: ब्राजिल बलियो कि कोष्टारिका कडा?
८ असार २०७५, शुक्रबार १४:०३
काठमाण्डौ, ८ असार । ब्राजिल समूह ‘ई’ को दोस्रो खेलमा आज कोस्टारिकािसँग भिड्दै छ ।
विश्वचर्चित स्टारले भरिएको पाँच पटकको विश्व च्याम्पियन ब्राजिललाई यसअघिको खेलमा स्वीट्जरलयाण्डले बराबरीमा रोकेपछि अाजको खेलमा कोष्टारिकाविरुद्ध जित निकाल्नै पर्ने दबाब छ भने कोस्टारिका पनि अाफ्नो पहिलो खेलमा सर्वियासँग पराजित भइसकेको स्थितिमा बलियो मानिएको ब्राजिलसँग जित निकाल्ने कसरतमा देखिन्छ ।
नकआउट चरणमा स्थान बनाउन पनि कोस्टारिका र ब्राजिल दुबैका लागि जित अत्यावश्यक छ । सर्वियासँग कोस्टारिका १–० ले पराजित भएको थियो भने ब्राजिलले पनि स्विटजरल्यान्डसँग १-१ को बराबरी खेलेको थियो । ब्राजिलका स्टार स्ट्राइकर नेयमार घाइते भएका कारण खेल्ने या नखेल्नेमा अन्योल्ता कायम छ । उता पाउलिन्हो र थियोगो सिल्भाले कोस्टारीका विरुद्धको खेल गुमाउँदै छन् ।
ब्राजिल कोउटिन्हो, फर्नान्डीन्हो रेनाटो अगुइएस्टो, गाव्रिएल जेसस लगायतका खेलाडीमा भर पर्नु पर्ने हुनसक्छ । विश्वकपको पहिलो खेलसम्मलाई आधार मान्ने हो भने ब्राजिल पछिल्ला १२ खेलमा अपराजित रहेको छ भने उसले तीन गोल मात्र खाएको छ । त्यसैले ब्राजिल स्वभाविक रूपमा बलियो मानिएको छ । इतिहास हेर्ने हो भने ब्राजिल कोष्टारिकाभन्दा बलियो रहको छ ।
ब्राजिलले कोस्टारिका विरुद्ध खेलेका १० मध्ये ९ खेलमा जित निकालेकोले स्वभाविक रूपमा ब्राजिल कोस्टारीकामाथि हाबी हुने विश्वास लिएको छ । १९६० यता ब्राजिल कोस्टारीकासँग पराजित भएको छैन त्यसेलेपनि ब्राजिल सोहि इतिहासलाई कायम गर्ने ध्याउनमा हुने छ। कोष्टारिका भने इतिहास बदल्ने दाउमा देखिन्छ । सन् २०१५ यता यी दुर्इ देशबीच कुनै खेल भएको छैन, त्यसकारण पनि संभावित नतिजाबारे पूर्वानुमान गर्न त्यति सहज छैन ।
ब्राजिल र कोष्टारिकाबीचको अाजको खेल ५:४५ बजे हुनेछ । त्यसैगरी, अाजको दोस्रो खेलमा बेलुका नेपाली समय अनुसार ८:४५ बजे नाइजेरियाले अाइसल्याण्डको सामना गर्नेछ भने तेस्रो खेलअन्तर्गत राति ११:४५ बजे सर्वियाविरुद्ध स्वीट्जरल्याण्ड भिड्नेछ ।